Ịgbakọ size nke steepụ na rotary nkebi
Ngụkọta oge nke steepụ na a pivoting nzọụkwụ nke 90 Celsius
ịbịaru ọnụ ọgụgụ 1: 12345678910
Number nke nzọụkwụ niile C 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
Number nke rotary nkebi C2 234567891011121314151617181920
Number nke ala-etoju C1 0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
The ọkpụrụkpụ nke eriri T
Usoro nke ịgbakọ osisi steepụ
C1 - ọnụ ọgụgụ nke nzọụkwụ ke ala March
C2 - Number nke rotary nkebi
Ngụkọta oge nke steepụ na a pivoting nzọụkwụ nke 90 Celsius.
Keosisi steepụ na rotary nkebi ike budata ego ohere ke ufọk-enweghị adịkwa ndirinfe na arụmọrụ.
Mgbe ịgbakọ kacha dee ọtụtụ rotary nkebi. Na m ahụmahụ kacha ogbo 3 na a obosara nke steepụ na 80 cm. More - nzọụkwụ ga-adị oke warara ma na otú iru ala.
Ọ bụrụ na ndị oghere na-emi odude dị nnọọ n'elu steepụ ahụ, elu nke dị mkpa ebe ke adiana ka yitewere, iji zere isi unan. Ọ ga-abụ na ọ dịghị ihe ọzọ 2 mita.
Na nke a Ọdịdị, obosara nke steepụ dị mkpa. N'ihi na ọ na-emetụta ndị ala nke na-atụgharị nzọụkwụ. The wider steepụ - nke ukwuu ọtụtụ nzọụkwụ nwere ike etinyere na-enweghị ọnwụ nke ntụsara ahụ.
N'ihi na nke di iche iche nke oru na akụkụ, handrails maka steepụ na mmemme-apụghị gbakọọ na-egosipụta.
Dị Mkpa! Rịba ama akụkụ rotary nkebi. Iji nweta nke ogbo - echefula tinye uru ndị a akụkụ nke protrusion.
Ngụkọta oge nke nkume akwa mgbago na ọ dị iche iche site na ngụkọta oge nke osisi ma ọ bụ metal akwa mgbago. Isi ihe - gbakọọ size nke nzọụkwụ. Ha elu ka a chọrọ iji na-otu ihe ahụ n'akụkụ nile.
Ihe omume ga-abịarukwa ndị ụlọ steepụ na rotary nkebi na isi angles na akụkụ.
Enwere m olileanya na usoro ihe omume ga-enyere gị aka chepụta ma wuo a n'ọkwá na-agba akaebe, ma ọ bụ n'ụlọ na ha onwe ha aka.